महिलालाई औषधि खुवाइ खुलामा पिसाब गर्न लगाउने कसरी समातिए ? - Jhilko
महिलालाई औषधि खुवाइ खुलामा पिसाब गर्न लगाउने कसरी समातिए ?
काठमाडौ ।पिसाब बढाउने औषधि पेय पदार्थमा मिसाएर खुवाई महिलाले पिसाब फिरेको हेर्न रूचाउने व्यक्ति फ्रान्सको संस्कृति मन्त्रालयका एक पूर्व बरिष्ठ अधिकारी भएको खुलासा भएको छ ।
आफूसँग कुराकानी गर्न आउने महिलाको पेय पदार्थमा उनले पिसाब बढी हुने औषधि मिसाइ दिने र ती महिलालाई आफूसँग लिएर बाहिर जाने र तिनले पिसाब फिरेको हेर्ने गरेको फ्रान्सको स्थानीय सञ्चार माध्यममा उल्लेख गरिउको छ । तिनले १० वर्षको अवधिमा अपस्कर्ट फोटो पनि लिने गरेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
रोजगारका लागि अन्तर्वार्ता दिन आउने युवा महिलाको पेय पदार्थमा यस्तो औषधि मिलाइ क्रिस्टियन एनले यस्तो काम गर्ने गरेका थिए । पेय पदार्थमा त्यो औषधिले प्रभाव गरेसम्म घुमाइ खुला ठाउँमा लगि पिसाब गर्न लगाउने गरेको खुलेको हो । त्यसबेल उनले फोटो लिने गरेका थिए ।
उनको यो दुव्र्यवाहार बारे गएको जुनमा खुलासा भएको थियो । उनलाई गत अक्टोबरमा पदबाट निलम्बन गरिएको थियो । एक वर्षपछि उनलाई यसका लागि कारबाही गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । पाँच जना पीडित र केही मन्त्रालयका स्रोतहरूले यसबारे स्थानीय मिडियालाई जानकारी दिएका छन् ।
अनुसन्धान पछि तिनका विरूद्ध यौन उत्पीडन, गुप्त तस्विर लिएको र लागु औषधिसम्बन्धी अभियोग लगाइने भएको छ । उनीले अपराध स्विकार गरेका छन् । उनले आफ्नो यो हर्कतबट मात्र १०–२० महिला पीडित भएको बताएका छन् ।
ती मध्ये एक पीडितलाई मूत्रथैलीमा संक्रमण हुँदा अपस्ताल भर्ना हुन परेको उनले बताए । उनले भने आफू यो औषधिको असर यस्तो हुने विषयमा जानकार नरहेको समेत बताएका छन् । मन्त्रालयका एक अधिकारीले उनलाई गत जुनमा कार्यालयमा फोटो लिएको देखेर शंका लाग्दा कम्प्युटर जाँचबाट उनको अपराध खुल्न गएको थियो ।
अनशन बसेको गोविन्द केसी अस्पताल भर्ना
गैर मस्जिद ढाँचा भएकाले रामजन्म भूमि भएको फैसला
बागलुङमा लगानी भित्र्याउन ठूला उद्यमी इच्छुक
लगानीको वातावरण गराउन तीन तहको सरकारले आवश्यक कदम चालेमा जलविद्युत्, केबलकार, स्टार...
छब्बीसौँ मदनआश्रित स्मृति दिवस तथा पार्टी एकताको एक वर्षका सर्न्दभमा आज मदननगरमा...
ग्रिन–टी को काईदा यस्तो फाईदा !
सामान्य चियापसलमा समेत ग्रिन टी सहजै पाइन थाल्नु र युवापुस्ता स्वस्थ्य जीवनशैलीप्रति...
पानीटङ्याकी नाकामा एक सय नेपाली अलपत्र
भारतबाट फर्केका सयभन्दा बढी नेपाली सीमावर्ती पानीटङ्याकी नाकामा अड्किएका छन् । मङ्गलबार...